Isbeddeleyaasha Xakamaynta Androgen-ka (SARMs) ayaa lagu sifeeyay inay yihiin fasal cusub oo ka mid ah xeryahooda daaweynta ee lagu gartaa faa'iidada gaar ahaanta istrogen-soosaaraha iyo xulashada unugyada. Daawooyinkan kor u qaada waxqabadka waxaa badanaa loo isticmaalaa cayaaraha iyo jir-dhiseyaasha si loo kordhiyo xoogga, murqaha, iyo adkeysiga wadnaha. Marka lagu daro faa'iidooyinkaas, SARMs sharci ah ayaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo daalka iyo hagaajinta soo kabashada ka dib jimicsi xoog leh, tababar xoog leh, fadhiyada wadnaha, iyo tababarka iska caabinta.
Mid ka mid ah waxtarka ugu weyn ee SARM-yada xalaasha ah ayaa ah inay leeyihiin saameyn dhiska muruqa laakiin ha u horseedin saameyn taban nidaamka wadnaha iyo qanjirka 'prostate'. Tani waa wax fudud sababtoo ah qaabeeyeyaasha xaddidan ee xaddidan iyo kuwa xaddidan waxay u dhaqmaan sida agonisteyaasha buuxa ee muruqyada iyo lafaha iyo sida agonistayaasha qaybta ah ee qanjirka 'prostate'. Si kale haddii loo dhigo, isticmaalka SARMs lama xiriiriyo waxyeellooyinka u eg ee steroid-ka ah sida maqaarka dufanka leh, finanka, ginecomastia, waxyeellada qanjirka 'prostate', yareynta xiniinyaha, sumowga beerka, lallabbo, iyo xadgudub xad dhaaf ah.
Aynu hadda helno macluumaadka ku saabsan SARM-yada ugu habboon caafimaadkaaga shakhsi ahaaneed, jirdhiska, ama ujeeddooyinka jirka.
MK-2866, oo loo yaqaan Ostarin iyo Ostabolic, waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican xulashada qaabeeyeyaasha xasaasiyadeed ee xasaasiyadeed marka ay timaaddo inay si togan u saamayso caafimaadka lafaha iyo murqaha. SARM-kan ayaa ah mid wax ku ool ah si loo daaweeyo muruqyada la xiriira da'da luminta unugyada iyo sidoo kale ka hortagga murqaha luminta xaaladaha caafimaad ee daran. Asal ahaan waxaa loo soo saaray daroogo lagu beddelayo daaweynta hoormoonka hormoonka iyo hormoonka koritaanka, Ostarine waxaa hadda si caadi ah u adeegsada xoogagga cayaaraha iyo jir-dhiseyaasha si ay u gaaraan himilooyinkooda jirdhiska.
Mid ka mid ah SARM-yada ugu cilmi-baarista badan, Ostarine wuxuu kaa caawinayaa inaad la kulanto waxqabadka jimicsiga ee muhiimka ah iyo natiijooyinka. Qalabkan wax dooriya ee xaddidan ee xaddidan ayaa si la yaab leh u awood badan oo waxaad dareemi kartaa saameyn xoog leh oo anabolic xitaa qadar yar oo ah 3mg. Habka ugu fiican ee loo isticmaalo Ostarine si loogu helo murqaha ragga ayaa ku ordaya wareegga 10 illaa 14 toddobaad qiyaasta maalinlaha ah ee 25mg (oo loo qaybiyay laba qaybood oo kala qaybsan oo ah 12.5mg midkiiba, hal mar subaxdii iyo hal fiidkii). Qiyaasta ugu fiican ee Ostarine ee haweenka waa 12.5mg maalin kasta wareegga SARM-yada ee 6 illaa toddobaadyada 10. Ostabolic waa in si qumman loo qaataa cuntada kadib iyo 30-40 daqiiqo kahor jimicsiyada daran, tababarka iska caabinta, kalfadhiyada wadnaha, ama tababarka xoogga. Waxaa si weyn loogu talinayaa in la raaco taageerada wareegga wareegga inta lagu jiro iyo daaweynta wareegga dambe (PCT) ka dib wareegga Ostarine SARMs.
Waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah SARM-yada ugu wanaagsan ee luminta dufanka jirka iyo hagaajinta adkeysiga, Kaararin (GW-501516) waa mid aad waxtar u leh inuu lumiyo dufanka caloosha adag iyo kuwa muuqaalka ku xiran sababo la xiriira sifooyinkiisa cajiibka ah ee aan-catabolic ahayn. GW-501516 waa kan labaad ee aan loo ilaalin karin murqaha iyadoo la wanaajinayo qaababka miisaanka luminta jirka (hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka, yareynta rabitaanka cuntada, iwm.). Kaararin ayaa sida ugu wanaagsan u adeegsada ragga ku jira wareegyada SARMs ee 10 illaa 14 toddobaad qiyaasta maalinlaha ah ee 10-20mg oo leh qiyaasta 10mg maalintii oo lagula taliyay kordhinta adkeysiga iyo qiyaasta 20mg maalintii ee kordhinta dufanka. Qiyaasta ugu habboon ee Cardarine ee haweenka waa 5-10mg maalin kasta wareegga SARM-yada ee 6 illaa toddobaadyada 10.
GW-501516 tan waxay ku sameysaa dib u habeyn jirkaaga si ay si buuxda u buuxiso shuruudaha tamarta jirka waxayna gubtaa asiidh dufan ah halkii ay kaheli laheyd karbohaydraytyada, kuwaas oo caadi ahaan ah isha uu doorbido tamarta. Tan markii la sameeyo, Cardarine wuxuu kudhacayaa hoos u dhigista heerarka dufanka jirka iyo culeyska iyadoo la yareynayo keydinta dufanka ee qaybaha dufanka jirka sida caarada dhexda, badhida, caloosha, iyo bowdyaha. Wax macno ah ma leh inaad durba caatowday ama aad isku celcelis tahay ama aad cayilan tahay, Cardarine wuxuu kaa caawin karaa in ka badan uun hab iyadoo la xoojinayo dariiqyada jirka ee la xiriira dheef-shiid kiimikaadka asiidh dufanka leh. Waxay sidoo kale kaa caawin kartaa inaad si adag u shaqeyso iyo in ka badan inta lagu jiro jimicsiga culus adoo u qaadanaya adkeysiga wadnahaaga heer gebi ahaanba cusub oo hagaagsan.
LGD-4033 waa SARM aad caan u ah labadaba sida bulking iyo jarida dheeri jimicsi. Qiyaasta celceliska qiyaasta Ligandrol, oo sidoo kale loo yaqaan Anabolicum, ragga waa 10mg maalin kasta. Qiyaasta ugu habboon ee Anabolicum ee haweenka waa 5-10mg maalin kasta wareegga SARM-yada ee 6 illaa 10 toddobaad. Waxaad filan kartaa guulaha muruqyada caatada ah inta udhaxeysa 6-12 lbs adoo u isticmaalaya kaliya 4-6 usbuuc inkasta oo LGD-4033 ugu habboon ay tahay 10 illaa 14 toddobaad. Sida Ostabolic, Ligandrol waa mid aad u kacsan isla markaana leh saamiga anabolis iyo androgenic ee 10: 1 sidaas awgeedna ku habboon bulking wareegyada SARMs. Waxaa si aad ah loogu talinayaa inaad qaadato dawadan jirka dhista ka dib cuntada iyo ugu yaraan 30-40 daqiiqo kahor jimicsiga. Isticmaalka LGD-4033 waa in lagu buuxiyaa taageerada wareegga wareegga inta lagu jiro iyo PCT ka dib wareegga LGD-4033 SARM.
Anabolicum ayaa sida ugu fiican loogu dhejiyay Nutrabol, Stenabolic, Ostarine, iyo Testolone oo ku jira wareegga bulking si loo arko saameyn isku dhafan. Adiga oo adeegsanaya, waxaad la kulmi kartaa horumarin ku saabsan heerarka isku dhafka borotiinka, muruqyada adag, haynta nitrogen, keydinta glycogen, tayada hurdada iyo muddada, soo kabashada murqaha, iyo dareenka ladnaanta. LGD-4033 ayaa waliba kaa caawin doonta inaad si dhakhso leh u soo kabato, nafsiyan iyo jir ahaanba. Waxaad sidoo kale filan kartaa jimicsi wax soo saar leh oo ay weheliso firfircooni iyo xoog muruqyada oo hagaagaya intaad ku socotid LGD-4033 wareegga SARMs.
MK-677 (oo sidoo kale loo yaqaan Nutrabol iyo Ibutamoren) ayaa ah doorashada ugu horeysa uguna cad ee qof walba uu raadinayo bedel ka wanaagsan kana raqiisan hormoonka koritaanka aadanaha. Daroogada caanka ah ee bulking, Nutrabol waxay muujineysaa karti iyo waxtar weyn si loo xakameeyo qaybinta tamarta loona kiciyo rabitaanka cuntada. Tan kaliya maahan, MK-677 aad ayey u fiican tahay in la yareeyo xaddiga dufanka jirka ku jira iyadoo lagaa caawinayo inaad xirato murqaha xoogga leh.
Qiyaasta lagu taliyay ee Nutrabol ragga waa 15-25mg maalin kasta wareegga 10 ilaa 14 toddobaad. Qiyaasta Nutrabol waa in la qaataa ka dib ama cuntada iyo ugu yaraan 30-40 daqiiqo ka hor tababarka iska caabinta, kalfadhiyada wadnaha, tababarka xoogga, ama jimicsiga daran. Haweenka, qiyaasta daawada maalinlaha ah waa 5-10mg wareega lix ilaa toban toddobaad.
Haddii aad raadineyso bedel weyn oo ku saabsan daaweynta beddelka, Tijaabin (RAD-140) waa dhisme aad u sarreeya oo anabolic ah oo xulasho wanaagsan u ah cayaaraha iyo jir-dhiseyaasha si loo kiciyo soo-saarka testosterone dabiiciga ah ee jirka. Wax badan oo anabolic ka badan testosterone oo leh qiyaasta anabolic iyo androgenic ee 90: 1. Waxay ku habboon tahay bulking wareegyada 'SARMs', RAD-140 waa dawo la yaab leh oo kor u qaadaysa waxqabadka si loo kiciyo soo kabashada muruqyada degdegga ah, loo hagaajiyo libido, loona kordhiyo murqaha.
Testolone ayaa ugu wanaagsan ee ragga u isticmaala qiyaasta maalinlaha ah ee 20-30mg ee wareegga SARMs ee tobanka ilaa afar iyo toban toddobaad, taas oo la doorbidayo in la qaato ka dib ama cuntada iyo ugu yaraan 30-40 daqiiqo kahor tababarka iska caabinta, kalfadhiyada wadnaha, ama jir dhiska ba'an. jimicsi. Haweenka, qiyaasta la soo jeediyey waa 5-10mg maalin kasta wareegga lix ilaa toban toddobaad. RAD-140 waxaa ugu wanaagsan in lagu dhejiyo Ostarine (MK-2866), LGD-4033, iyo Ibutamoren (MK-677) oo loogu talagalay bulking. Wareegga 'RAD-140 SARMs' waa in had iyo jeer lagu buuxiyaa Shaybaarada Jir-dhismeedka ah ee loo yaqaan 'SARMs Cycle Support 90 Capsules' taageerada wareegga inta lagu jiro wareegga iyo Shaybaarada jirka lagu sameeyo SARM-yada PCT 90 Capsules ee PCT wareegga kadib.
Cudurka Stenabolic (SR-9009)
Stenabolic, mid ka mid ah daawooyinka wareegga goynta ugu caansan, waa kaabista jirka ee ugu layaabka badan ee loo yaqaan aadanaha. Waxay awood u leedahay inay beddesho saacadda aasaasiga ah ee nafleyda si loo kiciyo sameynta mitokondria cusub waxayna jirka ka caawisaa inuu ka takhaluso mitokondria oo aan waxtar lahayn. Ugu wanaagsan ee lagu dhejiyay jarista SARM-yada sida GW-501516 iyo S-4, Stenabolic wuxuu ilaaliyaa heerka dheef-shiid kiimikaadka jirka ee dhinaca sare wuxuuna gubaa kalooriyada xad-dhaafka ah sababtoo ah suurtagalnimada dhiirrigelinta isbeddellada baaxadda leh ee heerka dheef-shiid kiimikaadka jirka.
Qiyaasta maalinlaha ah ee lagu taliyey ee Stenabolic ee ragga waa 30mg maalin kasta wareegga 10 ilaa 14 toddobaad iyo qiyaasta la soo jeediyey ee Stenabolic ee haweenka waa 10-15mg maalin kasta wareegga 6 ilaa 8 toddobaad. Qiyaasta Stenabolic waa in si habboon loo qaataa ka dib ama cuntada iyo 30-45 daqiiqo kahor jimicsiga jirka ama fadhiyada wadnaha.
Andarine, oo sidoo kale loo yaqaan S-4, ayaa ah kuwa ugu caansan ee la raadinayo-ka dib goynta daroogooyinka wareegga kuwaas oo si aad ah ula dhacsan ragga iyo dumarkaba. Goynta kaabadan jirka ee jirka ee SARM waa mid ka mid ah daawooyinka ugu wanaagsan ee kor u qaada jirka si ay uga caawiso jirka inuu kalago kilo dheeri ah hoosta suunka. Waxay si siman waxtar u leedahay helitaanka maqnaanshaha lixda xirmo iyada oo kicinaysa qiiqa dufanka iyadoo la xirayo qaboojiyeyaasha androgen ee unugyada dufanka iyo adipose.
Marka labaad midna looma haynin muruq adag, S-4 waxaa ugu wanaagsan in ragga loo isticmaalo qiyaasta maalin kasta ee 50mg maalin kasta (25mg hal mar subaxdii iyo 25mg hal jeer fiidkii) wareegga siddeed ilaa laba iyo toban toddobaad. Haweenka, qaddarka lagu taliyey ee Andarine waa 12.5mg maalin kasta.
Haddii aad rabto inaad iibsato SARMs sharci ah, Shaybaarada jirka lagu dhiso - Jumladleyda adduunka ugu jecel iyo soo saaraha kuwa ugu fiican uguna nadiifsan Xulayaasha Qaabdhismeedka Androgen - waa inay noqdaan xulashadaada koowaad iyo tan ugu cad. Tani maahan oo kaliya maxaa yeelay waxay bixisaa awood aad u sarreeya, tayo sare leh, iyo SARM dhab ah laakiin sidoo kale sababtoo ah sharcigan SARMs UK soo saaraha iyo iibiyaha SARM-yada qaaliga ah waxay kaa caawinayaan inaad ku hesho qiimaha ugu fiican uguna dhameystiran lacagta adag ee aad kasbatay.
← Post Older Post cusub →